Raha adika izany, ny fahotàna dia tsy hafa fa fahadisoana nahazo ny olona , ka nanjary tsy nahatratra ny tanjona izay nokendrena izy, izany hoe ny tanjona nikendren’Andriamanitra azy. Andriamanitra masina, izay tsy hafa fa Raintsika sady Mpamorona antsika, nanana ny fikasàny, ny lalàny sy ny sitrapony, ny fahotàna anefa dia niteraka elanelana, teo amin’ny olona sy Andriamanitra, ary andraikitry ny olona samirery izany fa tsy misy mihitsy antony avy amin’Andriamanitra. Andriamanitra dia masina, ary ny fahotàna dia tsy hafa fa fahalotoana eo anatrehany, ary efitra mampisaraka amin’Andriamanitra (Isaia 59:1,2). Hitantsika mazava tsara ao amin’ny Gen 3 ny fiandohan’ny ota sy ny vokatr’izany teo amin’ny olombelona.
Ny filàna arak’izany no mitarika ny olona ho amin’ny fakam-panahy, izany hoe na iza na iza tsy mahafehy ny filàna ao aminy,, dia manintona avy hatrany ny mpaka fanahy izy, dia Satàna izany. Amin’ny olona mitady hampanjaka ny filàna ao anatiny, dia tahaka ny misy andriam-by mahery vaika misintona an’I Satàna hankao aminy, ary rehefa tonga eo ny fahavalo, manamafy izay zavatra efa kotrehina ao anaty, dia sarotra ho an’ny olona ny hahatohitra an’izany. Vakio ny I Jao 2: 16; Jak 1:12-15; 4:1.
5) Tafasaraka amin’Andriamanitra mandrakizay: Ny saha Edena na ny Paradisa dia nafindran’Andriamanitra toerana. Tsy napetraka eto amin’izao tontolo izao intsony, fa novàna toerana dia any an-danitra izany. Io ilay voalaza ao amin’ny II Kor 12. Tsy miaraka ny toerana misy ny ota sy ny toerana misy an’Andriamanitra, satria Andriamanitra masina sy be voninahitra. Saingy raha mibebaka kosa ny zanak’olombelona, izany hoe tapa-kevitra hiala amin’ny fahotàny, dia honina indray miaraka amin’Andriamanitra any an-danitra izy, saingy ilay nofo, satria efa simban’ny fahotàna sy ny filàna, dia tsy maintsy avela ety ambonin’ny tany ho levona miaraka amin’ny tany, amin’ny alalan’ny fahafatesana. Ny olona kosa izay tsy nibebaka dia tsy mba honina miaraka amin’Andriamanitra na oviana na oviana reehfa miala eto, fa ho any amin’ny toerana izay tsy misy an’Andriamanitra sady hisy ny fahatezeran’Andriamanitra mandrakizay dia ny helo na afobe izany.